Posted by deadoralive at 2:43 PM
We all should aim for US$1 million equivalent in prize total. This is achievable if we actively promote it worldwide among Burmese communities.
"Killer" Than Shwe is not interested in dialogue, neither we are.
မောင်သောင်း ရော မပါ ဘူးလား ဗျ ။ သူ က စက်မှုတက္ကသိုလ် ပညာရေး ကို ကမောက်ကမ ၊ ဖြစ်အောင် ၊ ပျက်စီးအောင် စနစ်တကျ ဖျက်ဆီး ခဲ့ တယ်။ သူ့ သမိုင်း မှာ အထက်လူကို အောက်ပို့ အောက် လူ ကို အထက် ပို့ ပြီး သူ့ လက် အောက် က လူ တွေ ကို ပညာ ပေး ခဲ့ တယ်။သူ့ ကိုယ် သူ ဝန် ကြီး ချုပ် အဆင့် အထိ ရည် မှန်း ထား သူ လည်း ဖြစ် တယ်။